Black and Gray Theme APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာ
Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာ APK ကို
သင်ဂန္ဟာ android themes များအနေဖြင့်ပျင်းခံစားရပါသလား? သင်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သစ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်သင်၏ android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet စိတ်ကြိုက်ချင်ပါသလား သင့်ရဲ့အဖြေဟုတ်သည်မှန်လျှင်, ထို့နောက်သင် Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာဒေါင်းလုတ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာကသင်၏ Android device ကို၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အချို့ထူးခြားလှပသော icon များနှင့်နောက်ခံပုံများနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်အသစ်တစ်ခု App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကို install တစ်ချိန်ကသင်ကသင့်ရဲ့ device သစ်ကြည့်ခစျြလိမျ့မညျ။
✓အားလုံး icon များနှင့်နောက်ခံပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာရဲ့အဖွဲ့ကအလွန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် icon များနှင့်ဝေါလ်ပေပါ။
✓ကျနော်တို့သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြှင့် launcher အလွန်လွယ်ကူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်သင်ရုံဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပေးသူနှင့်သင့်ကိရိယာ၏ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ပိုပြီးခြေလှမ်းများမရှိပါ!
✓ကျွန်ုပ်တို့၏မတ် launcher app ကိုအခမဲ့ဖြစ်ပြီးကြောင့်အသက်အဘို့အခမဲ့နေဖို့ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအဖိုးအခလည်းမရှိ, အဘယ်သူမျှမကအထူးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မျှနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေအစဉ်အဆက်လှပသော launcher ဆောင်ပုဒ်ရှိသည်!
✓အခြားအက်ပ်မတူဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်သည်သင်၏ android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet နှေးကွေးဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်း launcher ပိုမြန်သင့်ရဲ့ device ကိုအလုပ်ရစေလိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည်။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာ Download များနှင့်အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ပျော်မွေ့!
1 ။ ဤလှပသော Black နဲ့ Grey ကအဓိကအကြောင်းအရာ Install;
2 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ launcher ကို install လုပ်ပြီး - (သင်မဖြစ်သေးရှိပါက);
3 ။ Start နဲ့, ဆောင်ပုဒ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဓိကအကြောင်းအရာ Apply ဖို့ "အဓိကအကြောင်းအရာ-မိုင်း" ကိုသွားပါ။
ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေးကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်ရှာကြ၏။ "theperfectpixelstudio@gmail.com" မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်မွမ်းမံမှုများဆောင်ကြဉ်းဆက်လက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ထံမှသိစေအခမဲ့ခံစားရပါ။
မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုငါးခုကြယ်များနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုစက်ဝိုင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့သင့်အလုပ်များအချိန်ဇယားထဲကခဏယူပေးပါ။ သင်၏အကူအညီနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကျိန်းသေပိုပြီးဆန်းသစ် themes များဒီဇိုင်းလှုံ့ဆျောမည်!
2.61 ကို MB
စုံလင်သော Pixel စတူဒီယို